कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खाण भन्छन्– बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएका जिल्लालाई विपद क्षेत्र घोषणा गर्छौँ
नयाँ पत्रिका बझाङ
२०७८ कार्तिक १७ बुधबार १९:४५:००
नयाँ पत्रिका, बझाङ
कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाणले बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको सुदूरपश्चिमका डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङलाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बताएका छन् । बुधबार हेलिकोप्टरमार्फत ती जिल्लाहरूको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेपछि उनले बझाङमा आयोजित कार्यक्रममा विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बताएका हुन् ।
कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खाणले बाढीपहिरो प्रभावित पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू इलाम, पाँचथरलगायतका प्रभावित जिल्लालाई पनि विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले पीडितहरूलाई राहत दिने, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने र हराइरहेकाहरूको खोजी गर्ने कार्यलाई सरकारले निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेको पनि स्मरण गराए ।
सरकारले बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई १ लाख, हराइरहेकाका परिवारलाई २ लाख र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो वर्षाको कारणले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यसका लागि हामीले सर्वप्रथम खोज गर्ने, उद्धार गर्ने, राहत दिने र पुनर्वासको व्यवस्था गराउने हो । त्यसका साथसाथै यहाँ भत्केका बाटोहरू बनाउने, सिँचाइ बनाउने, तटबन्ध बनाउने र यो भूखण्डलाई पहाडलाई कसरी नभत्कने बनाउन सकिन्छ ? र, भत्कने यसका भौगर्भिक कारणहरू के छन् ? त्यसका लागि पनि हामीले खोज अनुसन्धानको काम गर्नुपर्दछ । र, खोजअनुसन्धानबाट निस्कने निष्कर्षअनुसार काम गर्नुपर्दछ । पीडितहरूले सबभन्दा पहिले मृतकका परिवारलाई राहत रकम दिन भन्नुभएको छ । त्यो सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । १ जना मृतकका परिवारले १ लाख पाउनुहुन्छ । त्यस्तै, घाइतहरूलाई हामीले उपचारको व्यवस्था गर्ने हो, गरिराखेका छौँ । त्यस्तै, जो बेपत्ता हुनुभएको छ । हरेक बेपत्ता सदस्यका परिवारलाई २ लाख राहत दिनेछौँ । अब डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ, इलाम, पाँचथरलगायतका जिल्लाहरूलाई विपद क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्दछ ।’
कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खाणले बाढीपहिरोले भत्काएको सडक, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
#कार्यबाहक प्रधानमन्त्री # बालकृष्ण खाण
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग गृहमन्त्री खाणको भेट, नागरिकता विधेयकको विषयमा कुराकानी
ओली भेट्न बालकोट पुगे गृहमन्त्री र कानुनमन्त्री
एसपिपीमा नेपाल आबद्ध भएको छैन, हुँदा पनि हुँदैन : गृहमन्त्री खाण
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गृहमन्त्री खाणको भेटवार्ता
यातायात व्यवसायीलाई गृहमन्त्रीको आग्रह- यात्रुलाई बोझ हुने गरी भाडा नलिनुस् (भिडियोसहित)
दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज बनाउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणको निर्देशन, सबै जिल्लामा अनुगमन गरिने
श्रीमतीलाई करणी गरेको आरोपमा सोलुबाट एक पत्रकार पक्राउ
एकीकृत समाजवादीको प्रथम केन्द्रीय परिषद् बैठक सोमबार
ताइवानको वायुरक्षा क्षेत्रमा चीनका २९ लडाकु विमान छिरे
‘महिला पहिला’ अभियानसहित हिंसाविरुद्ध अघि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी छ : मन्त्री रेग्मी
माधव नेपाल सन्न्यासी भएर बस्ने हो, मुख छोड्दै हिँड्ने होइन : एमाले सचिव भट्टराई